Hargeysa: Shirweyne u furmay Bahda Qalinleyda Somaliland iyo Shirkadda Caymiska ee TAKAFUL oo Qayb weyn ka qaadatay |
Hargeysa: Shirweyne u furmay Bahda Qalinleyda Somaliland iyo Shirkadda Caymiska ee TAKAFUL oo Qayb weyn ka qaadatay
Hargeysa (GNN):- Bahda Qalinleyda ee ku nool gudaha Somaliland, ayaa isugu yimi shir-ballaadhan oo maanta ugu qabsoomay magaalada Hargeysa, iyadoo xubnaha ka qayb-galay isaga kala yimaaddeen gobollada dalka.
Shirkan ayaa ujeeddadiisu ahayd mid lagaga tashanayo isla markaana lagu darsayo caqabadasha ku xeeran bahda qoreyaasha ee ku dhaqan dalka gudihiisa iyo sidii ay u samaysan lahaayeen bar-kulan mideeya oo ay isku bartaan.
Cali Cabdi Coomay oo ku hadlay afka Guddiga qaban-qaabada shirka, ayaa ugu horeyn sharraxaad ka bixiyey ujeeddada ka dambaysa shirka iyo muhiimadda ay yeelanayso inay isu yimaaddaan Qoraayada Somaliland.
“Muhiimaddu waxa weeyi in qalinleyda dalka gudihiisa ku sugani isbartaan oo tashadaan, wixii talo iyo tusaale ahna sidii ay u kala qaadan lahaayeen oo hadhowna kulamo ka yeeshaan,” Sidaas ayuu yidhi Cali Cabdi Coomay, isagoo intaas ku daray, “Waxa jiray socdaallo aanu ku tagnay gobollada si aanu ula kulanno Bari iyo Galbeedba. Magaalo kasta oo aanu tagnay waanu kula kulmaynay inta suurta-galka ah sidii loo tashan lahaa, laysugu iman lahaa, waxna laysku weydiin lahaa maadaama qalinleydii gudaha dalka ku noolayd ay kala firidhsan yihiin.”
Waxa kale oo halkaas ka hadlay qaar ka mid ah qoreyaasha kulanka ka qayb-galay kuwaas oo isku raacay, kana markhaati kacay faa’idada uu kulankani u leeyahay bahda Qalinleyda oo ay sheegeen inay ugu muhiimsan tahay isbarashada iyo in midiba ka kale uga faa’ideeyo aqoonta iyo waayo-aragnimada uu dheer yahay.
Shirkan oo noqonaya kii ugu horreeyey noociisa ee lagu faaqido aayo-ka-tashida danaha bahda Qalinleyda, ayaa la soo xidhay maalintii shalay, waxaana loo ballamay kulamo kala oo lagu sii xoojinayo ka-midho-dhalinta ujeeddada loo soo qaban-qaabiyey.
Dhinaca kale, Waxa xusid mudan in shirkan qaban-qaabadiisa ay si weyn uga qayb-qaadatay Shirkadda Caymis ee Takaful oo taageero dhaqaale u fidisay guddiga qaban-qaabada shirka oo maamulka sare ee shirkadda ka codsaday, iyadoo maamulkuna ka jawaabay codsigaas ay u gudbiyeen.
Cali Cabdi Coomay oo ku hadlay afka Guddiga qaban-qaabada Shirka, ayaa maamulka shirkadda Takaful ku tilmaamay inay had iyo jeer garab-istaagaan, inta awooddooda ahna ku caawiyaan dhalinyarada iyo sidoo kale bahda Qalinleyda.
“Shirkadda Takaful waanu u mahadcelinaynaa sida ay mar walba u garab istaagaan dhalinyarada iyo cid kastoo caawimo uga baahata. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa maamulka shirkadda, runtiina si weyn ayuu qayb uga geystay qaban-qaabadii shirka, mar walbana way taageeraan Qalinleyda.
Shirkaddu waxay naga caawisay kharashkii qaban-qaabada shirka oo ay ka mid ahayd dadkii ka qayb-qaatay,” Sidaa waxa yidhi Cali Cabdi Coomay oo shirkadda Takaful uga markhaati kacay inay qayb laxaad leh ka qaadato dhiirrigelinta dhalinyarada iyo bahda qoraalkaba.
Shirkadda Caymiska ee Takaful Insurance of Africa, ayaa ka shaqaysa Adeegyada caymiska ee Bariga iyo badhmaha Qaarada Afrika, iyadoo xafiisyo ku leh magaalooyinka waaweyn ee dhulka Soomaalidu degto, waxaanay bixisaa adeegyada caymiska oo dhan, sida Caafimaadka, gaadiidka, guryaha iyo Socdaalka Badaha, kuwaasoo ku shaqeeya Nidaamka Islamic Insurance ama Caymiska Islaamiga ah.